जसले मन्त्री पद सम्हालेको साढे २ घण्टामै राजीनामा दिए ! | दर्पण दैनिक
जसले मन्त्री पद सम्हालेको साढे २ घण्टामै राजीनामा दिए !
प्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर ५ गते ०७:२७
एजेन्सि । भारतको बिहार राज्यका शिक्षामन्त्री मेवालाल चौधरीले बिहीबार पदभार ग्रहण गरेको साढे २ घण्टामै राजीनामा दिएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्मयका अनुसार उनको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ। राज्यपाल फागु चौहानले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए। चौधरीले नीतीशकुमारसँगै यही नोभेम्बर १६ मा मन्त्रीको शपथ लिएका थिए।
मेवालालको राजीनामापछि उनको विभागमा अब अशोक चौधरी आउने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। मेवालालाल चौधरी सन् २०१०–२०१५ सम्‍म बिहार कृषि विश्वविद्यालयका कुलपति थिए। त्यसबेला उनले साबौर प्रहरी चौकीमा नियुक्तिमा अनियमितता गरेको अभियोग लागेको थियो र उनीविरुद्ध एफआईआर दर्ता गरिएको छ। हाल उनी जमानतमा छन्।
ग्वाटेमालाको संसद भवनमा विपक्षीले लगाए आगो
२०७७ मंसिर ७ गते ०९:१६
एजेन्सि । सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीले ग्वाटेमालाको संसद भवनमा तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी समेत गरेका छन्। संसद भवनको एक क्षेत्रमा सयौँ प्रदर्शनकारी छिरेर छोडफोड तथा आगजनी गरेका हुन् । उनीहरुलाई दंगा प्रहरीले तितरवितर पारेको छ ।
कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि क्यालिफोर्नियामा कर्फ्यू
२०७७ मंसिर ७ गते ०७:१६
क्यालिफोर्निया । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि कर्फ्यू जारी भएको छ । शनिबारदेखि रातिको समयमा कर्फ्यू लागु भएको क्यालिफोर्निया राज्य सरकारले जनाएको छ । गएको अगस्टमा पश्चिमी राज्यमा सबैभन्दा धेरै संक्रमण देखिएको थियो । तर अहिले त्यो भन्दा पनि धेरै संक्रमण दैनिक रुपमा देखिन लागेको लस एन्जलस टाइम्सले जनाएको छ ।